+86 15 १15१8282787883030
हात ब्रेक भल्भ
मर्सिडीज बेंजको लागि स्पेयर पार्ट्स
Scania को लागी स्पेयर पार्ट्स
भोल्भोका लागि स्पेयर पार्ट्स
DAF को लागी स्पेयर पार्ट्स
IVECO को लागी स्पेयर पार्ट्स
MAN का लागि स्पेयर पार्ट्स
RENAUL का लागि स्पेयर पार्ट्स
कसरी क्लच र थ्रोटल समन्वय गर्ने?
२०-०8-२7 मा व्यवस्थापक द्वारा
क्लच र थ्रोटललाई कसरी सहयोग गर्ने? पहिले, गियर तटस्थ स्थितिमा हुनुपर्दछ। कार सुरु गरेपछि, क्लचलाई अन्त्यमा डिप्रेस गर्नुहोस्, त्यसपछि गियरलाई पहिलो गियर स्थितिमा राख्नुहोस्। त्यसपछि क्लचलाई ढिलो गर्नुहोस्। जब क्लच लाई छाड्नुहोस्, ढिलो हुनुहोस्। Whe ...
हरेक चोटि ब्रेक डिस्कहरू परिवर्तन गर्न कति किलोमिटरहरू छन्?
यो भनिन्छ कि ब्रेक प्याडहरू कति पटक यसलाई परिवर्तन गर्ने तय गरिएको छैन। यो ड्राइभि conditions्ग अवस्था र ड्राइभिंग बानीमा निर्भर गर्दछ। यी बानीहरूले ब्रेक प्याडको प्रयोगलाई असर गर्दछ। यदि तपाईं यसलाई राम्रोसँग मास्टर गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंले पाउनुहुनेछ कि धेरै अवस्थाहरूमा त्यहाँbमा कदम बढाउनु आवश्यक पर्दैन ...
पहिलो समाचार विश्वव्यापी संयुक्त जोडी को विशेषताहरु के हो?
विश्वव्यापी युग्मनले यसको संयन्त्रको विशेषताहरु प्रयोग गर्दछ टोक़ र आन्दोलन भरपर्दो प्रसारण गर्न सकिन्छ। विश्वव्यापी दम्पतीको विशेषताहरु हुन्: संरचना फरक पेसिrating कोण छ, र दुई अक्षीय को एकीकृत को कोण ...
हाम्रो जाँचको लागि सदस्यता लिनुहोस्:
T T Tianyang रोड, Fengqiao शहर, Zhuji शहर, Zhejiang प्रान्त